peptide Better nolosha Better
Shenzhen JYMed Technology Co., Ltd waa ganacsi farsmada heerka sare ah ku hawlan cilmi-baarista iyo horumarinta, wax soo saarka iyo ganacsi ee peptides ku salaysan waxyaabaha ay ka mid yihiin peptides firfircoon ee dawooyinka qayb, peptides la isku qurxiyo, iyo peptides caadada iyo sidoo kale horumarka cusub ee daroogada peptide. JYMed leedahay laba shuraakada, daacad leedahay: Shenzhen JYBio Pharmaceutical Co., Ltd iyo Hubei JY Pharmaceutical Co., Ltd, taas oo ka yar dhismaha.
【R & D xarunta】
R & D xarunta JYMed ee, oo ku yaalla Shenzhen, ayaa lagu wadaa ilaa ee cilmi-baarista iyo horumarinta ee walxaha daroogada cusub, oo isdiyaari, peptide iyo waxyaabaha la xiriira. Xaruntu waxay ku qalabeysan yahay synthesizer peptide casri ah, oo waaweyn-awoodda nidaamka nadiifiskeeda u preparative, iyo alaabtii muusikada gorfaynta dhamaystiran oo ay ku jiraan MS, HPLC, GC, UV, IC iwm R & D Xaruntu waxay sidoo kale waxay bixisaa taageero technology for helitaanka daawada iyo wax soo saarka nidaamka cusub ee labada wareejinta.
JYMed leedahay afar khadadka-soo-saarka API peptide ee Nanjing waafaqsan waafaqsan FDA cGMP, iyo laba dose khadadka-soo-saarka noolaha dhammeeyayna ay ku jiraan Shenzhen siin kara yaalla ganacsiga ee injectables peptide injectables awoodda yar iyo wax soo saarka budada Xayiraadda-la qalajiyey ka yar tilmaamaha cGMP. Intaa waxaa dheer, waxaan la dhisayo lix iyo toban khadadka-soo-saarka, waayo, API peptide in Xianning, gobolka Hubei, Shiinaha, kaas oo noqon doona mid ka mid ah ugu weyn ee API peptide saldhig saarka ee Shiinaha.
JYMed uu leeyahay nidaamka warshadaynta peptide dhameystiran oo hufan, ku siin karaan adeeg peptide Comprehensive, oo ay ku jiraan CRO / CMO / CDMO / OEM iyo taageero arrimaha Regulatory. Si aad u noqoto Your qeybiyaha lagu kalsoonaan karo, madax banaan iyo Waxyeelo for peptides aad!
Tirokoobyada ugu Muhiimsan ee JYMed
● 315 oo shaqaale heer qaran ah
laboratories ● 2 RD (Pingshan, Nanshan)
● 3 goobaha wax soo saarka
● oo isdiyaari, Nanjing Lishui, Jiangsu, 4 khadadka-soo-saarka waafaqsan FDA
● oo isdiyaari, Xian'ning, HuBei, 16 khadadka-soo-saarka waafaqsan FDA (ka yar dhismaha)
● waxyaabaha dhammeeyey, 2 khadadka qiyaasta ee Shenzhen Pingshan, Guangdong
● 7 waxyaabaha soo gudbin W si CFDA, 5 waxyaabaha hoos xereynta
● 1 saarka IND gudbiyay CFDA
● 1 saarka gudbiyey VMF (-US FDA) oo helay shahaado CEP